The Irrawaddy's Blog: ချောင်းသာက အမှိုက်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မြေး
ပျံကျအသုတ်ဆိုင်တဆိုင်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ အမှိုက်များ (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ချောင်းသာမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေမြေး နေရွှေသွေးအောင် (ခေါ်) ဖိုးလပြည့်ကြောင့် အမှိုက်တွေ ပွနေပါတယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့ပါတယ်။
ဘာကြောင့် အမှိုက်က ဖိုးလပြည့်ကြောင့် ပွရသလဲဆိုတော့ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ။ ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာလတုန်းက ဖိုးလပြည့်ဟာ ချောင်းသာကမ်းခြေကို လာပါတယ်။ အဲဒီ အနီးနားမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ဒေသခံတွေကို မြင်ပြီး သနားလို့ ကမ်းခြေမှာ ဈေးရောင်းခွင့် ပေးခဲ့ပါသတဲ့။
ချောင်းသာကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်တခုက တာဝန်ခံက “ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွေမြေးက ချောင်းသာကိုလာတော့ ဆင်းရဲသားတွေကို ဈေးရောင်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီကတည်းက ကမ်းခြေမှာ စာပွဲးချ၊ ကုလားထိုင်ချပြီး ဈေးရောင်းနေကြတာ အခုထိပဲ။ အမှိုက်ရှင်းလင်းတာတွေ စနစ်တကျ မရှိလို့ ဖြစ်ကုန်တာပါ” လို့ ပြောပြပါတယ်။
ဖိုးလပြည့်က ခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့ ကမ်းခြေတလျှောက်မှာ ကော်ဖီဆိုင်၊ အအေးနဲ့ ဘီယာအရောင်းဆိုင်၊ အကင်ဆို၊ အမြည်းဆိုင်၊ အသုတ်ဆိုင်၊ ရာသီပေါ်သီးနှံဆိုင်၊ ကွမ်းယာဆိုင်တွေ အလျှိုလျှိုပေါ်လာပါသတဲ့။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမြေး အမိန့်မို့ စည်ပင်အပါအဝင် ဘယ်အဖွဲ့ကမှ အဲလိုဈေးရောင်းတာ၊ စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်တာတွေကို တားမြစ် အရေးယူတာမျိုး မလုပ်ရဲပါဘူးတဲ့။
သင်္ကြန်ပြီးကာလမှာ ချောင်းသာ အပမ်းဖြေခရီးသွားဦးရေ မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ ကမ်းခြေက ပျံကျဆိုင်တွေလည်း ၅၀ ကျော်အထိရှိလာပါတယ်။ အဲဒီတော့ စားကြွင်းစားကျန်၊ ပုလင်းခွံ၊ ဘီယာဘူးခွံ၊ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်အပါအဝင် အမှိုက်တွေ ကမ်းခြေမှာ ပွနေပါတယ်။ တချို့အမှိုက်တွေလည်း ပင်လယ်ထဲ မျောပါကုန်ပါတယ်။
ချောင်းသာကို အပမ်းဖြေ ခရီးထွက်သူတယောက်ကတော့ “ဒေသခံတွေ အခုလို ဈေးရောင်းတဲ့အတွက် သူတို့ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေတာတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှိုက်တွေ၊ စားကြွင်းစားကျန်တွေကိုတော့ အခုလိုမျိုး ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ စွန့်ပစ်တာမျိုးကို တားမြစ်ပြီး အရေးယူသင့်တယ်။ ကမ်းခြေညစ်ပတ်တဲ့အပြင် ပင်လယ်ကို ညစ်ညမ်းစေတယ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထိခိုက်စေတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ကမ်းခြေတလျောက်လုံးမှာ အမှိုက်တွေနဲ့ ညစ်ပတ်နေတယ်။ ခရီးသွားတွေကို အမှိုက်ပုံးထဲ အမှိုက်ပစ်တတ်အောင် အသိပညာပေးဖို့တော့ လိုတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့က ခရီးသွားတဦးကလည်း ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ကနေ မိုင် ၁၀၀ ကျော် ဝေးတဲ့ ချောင်းသာကမ်းခြေမှာ ဟိုတယ် ၁၅ လုံးဖွင့်ထားပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဟိုတယ် ၃ လုံးရှိပါတယ်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်လောက်တုန်းက ဒေသခံတွေရဲ့ အုန်းခြံတွေကို စစ်အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေက သိမ်းပိုက်ပြီး အပမ်းဖြေကမ်းခြေတည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။
(၂၀၁၀ ဇန်နဝါရီလတုန်းက ချောင်းသာနဲ့ ငွေဆောင်က ဒေသခံတွေရဲ့ အပမ်းမပြေနိုင်တဲ့ ဘဝအမောတွေ၊ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဆောင်းပါးရှင် ကြည်ဝေက ဒီနေရာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ပါ။)
ဒီတစ်ချက်တော့ ဖိုးလပြည့် လုပ်တာ သာဓုခေါ်ပါတယ်
ငွေဆောင်မှာဆို ဟိုတယ်တွေအနား ဈေးသည်တွေ ကပ်လို့မရပါ
သူတို့လေးတွေ စီးပွားရှာတာကို မုဒိတာပွားစမ်းပါ
အမှိုက်ကိစ္စကတော့ ဟိုတယ်တွေကဘဲ တာဝန်ယူပေါ့ဗျာ
သတင်းထောက်ကြီးရေ နဲနဲတော့ အကောင်းမြင်ဗျာ....
layminthar said... :
Anonymous ဆို တဲ့ဆရာ သ မား ခင် ဗျား ရဲ့အိမ် ရှေ့ ၊ ဆိုင်ရှေ မှာ အဲ ဒီ ဈေး သယ် တွေ ဈေး ရောင်ူးပီး အ မှိူက် တွေ ဖွ ထား ရင် ရော ထွက်ုကုံး မ လား ။
ဒါကတော့ အလိုက်သိမူ့လိုတာပေါ့ အထက်က ဈေးရောင်းခွင့်လေးပေးတာတောင် အခွင့်ရေးပဲယူတက်ပြီး စည်းကမ်းပိုင်းအားနည်းနေတယ်ဆိုတာ ပြတာပဲ ဘယ်လောက် အခွင့်ရေးတွေပေးပေး ပြည်သူတွေက စည်ကမ်းပိုင်းအားနည်းနေရင် ဖရိုဖရဲဖြစ်နေအုံးမှာပဲ.... ဒါက သက်သေပြတာပဲ
ဟိုတယ်တွေ ပူပေါင်းပြီး အမှိုက်သိမ်းဝန်ထမ်းတွေခန့်ပြီး သိမ်းဆည်းပေးတာ ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် ...........
COMMENT 1.Good decision to allow this.But Why can he do ?Who is this creature?
COMMENT 2.he and His family suck the blood of civilian.Pls don't say EXCUSE in front of graves.
COMMENT 3.It is better to give them permit to import motorcars.
Minlwannaung.blogsport.com said... :
သတင်းထောက်ကြီးရေ နဲနဲတော့ အကောင်းမြင်ဗျာ.... (ဆိုတဲ့စကားကို ထပ်ဆင့်ထောက်ခံပါတယ်ဗျာ...မှန်ပါတယ်..အကောင်မြင်ဖို.လိုနေပါတယ်....အမှိုက်ကို စည်းကမ်းရှိရှိသိမ်းဆည်းဖို.တစ်ခုပဲပြောစရာရှိပါတယ်..အခြားတိုင်းပြည်တွေမှာလဲ ဒီလိုပဲဈေးရောင်းနေကြတာပါပဲ...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနီးအနားကလူတွေစီးပွားရေးပြေလည်နိုင်တာကတော့အမှန်ပဲဗျှ........) ဝေမင်း
မျက်မှန် said... :
ဖိုးလပြည့် တောင် လူလိုနားလည်လာပြီဘဲ၊အခြေခံ မရှိဆင်းရဲသားတွေအတွက် များများပိုလုပ်ပေးပါ၊နာရေးအသင်းကို ကူညီပါ၊ဆေးခန်းတွေဖွင့်ပေးပါ၊ စာသင်ကျောင်းတွေ ထပ်ဆောက်ပါ။ လူထု အတွက် လက်တွေ့ လုပ်ပေးရင် လူထု လက်ခံမှာပါ။ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေလို မီဒီယာမှာ အာပေါင်အာရင်းသန်သန် ပွားနေတာထက်စာရင် မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ပေးတဲ့ အခွင့် အရေးမျိုးများများ ထပ်လုပ်ပေးပါ။ လက်တွေ့ ဆန်သူတိုင်းကို အကောင်းမြင်တတ်တာ လူတွေရဲ့ သဘာဝပါ။
အမှိုက် က တော့ မင့် အခန်းထဲ တောင် မ ၇ှင်း ၇င် ပွ မှာဘဲ လုပ် တာ လုပ် ၇ှင်းတာ ၇ှင်း
ဈေးရောင်းတာဈေးသည်အလုပ်ပဲ။ ဈေးသည်ကလည်းဝယ်မဲ့လူနားလာရောင်းမှာပေါ့။ ချောင်းသာကမ်းခြေမှာရှိတဲ့စည်ပင်တွေက အမှိုက်လေးတောင်မရှင်းနိုင်ဘူးလား။ အမိုက်ပွမှာစိုးလို့ဈေးမရောင်းရလို ပိတ်တာ မဆလ ခေတ်က မိုက်မဲမှုပါ။ ဘယ်သူကပဲခွင့်ပြုခိုင်းခိုင်း ရောင်းချင်သူနှင့်ဝယ်ချင်သူအကျိုးဖြစ်တဲ့ကိစ္စ၊ ချာင်းသာကမ်းခြေမှာရှိတဲ့စည်ပင်တွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဘို့တာဝန်ပေးပေါ့။
ကို Anonymous ရေ...... စည်းကမ်းက စည်းကမ်းပါ.... စည်းကမ်းမရှိလို ညစ်ပတ်ချင်တိုင်းညစ်ပတ်မယ်ဆိုယင်... ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ကမ်းခြေပါပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်....
အော်ကောင်းတာလုပ်လဲအပြစ်ပြောတာပဲ လူဆိုတာမျက်မှုန်းကြိုးရင်ပြန်ပြင်လို့မရဘူးလားမသိဘူး။ လူတွေကိုအဆိုးမြင် ၀ါဒနဲ့မကြည့်နဲ့ ကိုယ်တိုင်လူသားတွေအကြီုးကိုတစ်နေ့ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လဲလို့ ပြန်တွေးပေးပါ ။ ( ကောင်းစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ပါ ) အရိုးဆွဲနေတဲ့ အမုန်းတရားတွေဖျောက်ဖျက်ကြပါ။
သူနဲ့ မဆိုင်ဘူလို့တော့ထင်တယ် ပြီခဲတဲ့ တစ်လကရောက်သေတယ် သောင်ပြင်မှာ ငါးရိုး တွေ တုတ် တွေနဲ့ ဆူးသွား သေတယ် စည်ကမ်းပဲ လိုတယ် ဘယ်ကစလုပ်ရလဲ...............5နှစ်အထက်အကုန်သတ်မှပဲရမယ်
If Phoe La Pyae did it without any ulterior
motive and it came out of the kindness of his heart, I am moved by his act of compassion. He has the key to his grandfather's heart, he can save his grandfather's soul. It
is never too late. Stop
all the in justice, use the billions that are stolen from the country.
and set up projects to help the people.
ဖိုးလပြည်ကဈေးေ၇ာင်းခွင်.ပဲပေးခဲ.တာလေ...အမှိုက်သိမ်းတာစည်ပင်တာဝန်ပဲလေ...ဘယ်သူအမှိုက်ပစ်ပစ် အမှိုက်သိမ်း၇မှာစည်ပင်တာဝန်ပဲလေ....ဈေးကောက်တောကောက်ပြီ အမှိုက်တောမကောက်ချင်လို၇မလား...ဖိုးလပြည်.က စည်ပင်ကိုအမှိုက်မကောက်ဖိုပြောခဲ.လိုလား...စဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်ကြပါ...
ခုနက တခုကျန်ခဲ.လိုပါ...နိုင်ငံတကာကမ်းခြေတွေမှာလည်းအမှိုက်ချကြတာပါပဲ..ဒါပေမယ် ညေ၇ာက်လို၇ှိ၇င် စည်ပင်က ကားကြီးတွေ နဲအမှိုက်ကောက်တယ်..မြေကြီးကိုလယ်ထွန်စက်လိုဟာတွေနဲလှန်ပစ်လိုက်တယ်..အဲဒီတောသဲတွေကနုပြီးအမှိုက်မကျန်တောဘူးပေါ.....
ကျနော်က ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား စစ်အစိုးရရဲ့ တလွဲလုပ်ရပ်တွေကို အမြဲဝေဖန်နေတဲ့သူ....ဒါပေမယ့် ဒီတခါတော့ ပြောရအုံးမယ်။ အမှိုက်ပွတာ ဖိုးလပြည့်ကြောင့် ဆိုပြီး ရေးရင်မှားတယ်။ ဖိုးလပြည့်က ဆင်းရဲသားတွေကို သနားလို့ ဒီနေရာမှာ ဈေးရောင်းခွင့်ပေးတာ (တပ်ချုပ်ကြီးမြေးမို့ အာဏာကျော်တာ ထားလိုက်ပါတော့) ကျနောကတော့ အကောင်းပဲ့ မြင်ပါတယ်....ဒီလိုသနားတတ်တယ်ဆိုတာ သိရလို့ ဝမ်းတောင်သာသေး...အဲ...အမှိုက်ပွတာ အမှိုက်တွေကို သိမ်းဆည်းဖို့ တာဝန်ပျက်ကွက်သူကတော့ ဒီနေရာကို တာဝန်ယူထားတဲ့ စည်ပင်ပဲ့...စည်ပင်မရှိဘူးဆိုရင် ဟိုတယ်တွေက ဒီအမှိုက်တွေကို တာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်။ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ ပြောလို့မရဘူး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီး တခု ဒီဒေသမှာလုပ်ရင် မဆိုင်လည်း စေတနာအရ ဒီပြသနာကို ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တယ်။
ဒါကတော့ ဖိုးလပြည့် အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး..သူက စေတနာနဲ့ ခိုင်းတာပါ...အမှိုက်ရှုပ်ပွတာကတော့ ဝယ်စားတဲ့ သူတွေကလည်း အမှိုက်တွေကို စည်းကမ်းမဲ့မစွန့် ပစ်ဖို့ လိုသလို..ဈေးသည်တွေကလည်း အနညးနဲ့ အများတော့ ကိုယ့်ဆိုင်ဝန်းကျင်မှာ သန့်ရှင်းလေး သေချာလိုဖို့ လိုအပ်တာပေါ့..ဗျာ...
g|-|0$7 said... :
ဟိုတယ်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးထင်ပါတယ်... လူတွေကို စည်းကမ်းတကျရှိအောင် ပညာပေးရမှာလို့ထင်ပါတယ်
အကောင်းမြင်တာလဲမြင်ပေါ့ဗျာ၊ ဘယ်နေရာမဆို၊ သူစည်းသူ့ကမ်းလေးတော့လဲရှိရမှာပေါ့၊ အပမ်းဖြေချင်လို့Beach လာပါတယ်၊ ဈေးထဲရောက်နေသလိုခံစားရရင် အိမ်မှာပဲနေတော့မှာပေါ့။ ရပ်ကွက်ကဆင်းရဲတဲ့သူတွေ ဈေးရောင်းချင်လို့ ခင်ဗျားအိမ်ရှေ့မှာ ဆိုင်တွေမိုးလင်းကမိုးချုပ်လာရောင်းကြမယ်ဗျာ၊ အမှိုက်တွေအိမ်ရှေ့မှာလာပုံမယ်၊ ငါးညှီရေတွေလာသွန်မယ်၊ အော်ဟစ်စကားပြော၊ ငြင်းခုံ၊ရန်ဖြစ်ကြမယ်၊ ဆင်းရဲလို့စီးပွားရှာတာပဲ ဆိုပြီး ခင်ဗျားကောမုဒိတာပွားပေးနိုင်မလား၊
Reply to the above comment :
Does he have right to makearule ? He is justacitizen . Sometime I feel that majority of burmese dont know what is the definition of citizen , government and constitution .
ဟုတ်ပါတယ် အပေါ်က မှတ်ချက်ကိုတစ်ဝက် ထောက်ခံပါတယ်
ဖိုးလပြည့်လုပ်တာ လုံးဝ သာဓုခေါ်ပါတယ်
အမှိုက်ကိစ္စကတော့ ရောင်းချတဲ့သူနဲ့ စနစ်တကျ
အမှိုက်မပစ်တတ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အားနည်းချက်ပါ
သာဓုခေါ်ပါတယ်..၁ကြိ်မ်.. ဖိုးလပြည့်..၃ ကြိမ်ခေါ်စေချင်တော့၊မခက်ပါဘူး၊ အမှိုက်သိမ်းစံနစ်ကိုဟိုတယ်တွေကိုအကွက်ချတာဝန်ယူခိုင်း၊ စောစောကဈေးသည်တွေကိုစောင့်ဖမ်းနေတဲ့ရဲတွေကို၊ အမှိူက်စောင့် တာ ၀န် ပေး၊ နိုင်ငံတကာကမ်းခြေတွေမှာတော့အမှိူက်ကင်းစင်တဲ့ ကမ်းခြေမှနိုင်ငံခြားသားလာတာ.. ထိုင်းမှာဆိုပတ္တယားကမ်းခြေကိုတော်တော်လူပြောများနေပြီ..အမှိုက်ပြသနာ..
အမှိုက်ကိစ္စကတော့ အားလုံးတာဝန်ယူမှုရှိမှ အမှိုက်ကင်းစင်သော နယ်မြေဖြစ်မှာပါ။ သေချာတာကတော့ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် စည်ပင်သာယာက်ာမတီကနေ စနစ်ကျတဲ့အမှိုက်သိမ်းစနစ် ထားပေးဖို့နဲ့ ကမ်းခြေကို လာသမျှလူတွေကို အမှိုက်တွေ စည်းကမ်းမဲ့မပစ်အောင် တာဝန်ကို စေတနာရှေ့ထားပြီး လှုံ့ဆော်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ပညာပေးလှုံ့ဆော်တယ် ဆိုရာမှာလည်း ပြည်သူတွေဆီက သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေ သာယာအောင် လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီး စည်ပင်ခွန်ယူထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ်ပြီးအဲဒါကိုအကြောင်းပြ ငွေထပ်မကောက်ကြဖို့လိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှိလာရင် အဲဒီအပေါ်မှာ ၀န်ထမ်းတွေ လုပ်စားနေကြလွန်းလို့ ပြောရတာပါ။
အမှိုက် ကို ပစ် တဲ့ သူ က လဲ သေချာ သတ်မှတ်တဲ့ နေ၇ာပြစ် သန့် ၇ှင်းေ၇း လုပ် တဲ့ သူက လဲ သေချာ လုပ် ၇င် ပြိးသွား မယ် ကိစွပါ
ဈေးသယ်တွေလဲ စည်းကမ်းလိုအပ်ပါတယ်...ဟိုငနဲလေး လုပ်ပေးသွားတာဆိုတော့ ဒေသခံတွေ အတွက်တော့ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့..မြန်မာတွေဆိုတာကလဲ အမှိုက်ကို ဘယ်လိုပစ်ရမယ်ဆိုတာ သေချာမသိကြသေးပါဘူး..ကိုယ်ဈေးရာင်းတဲ့နေရာတော့ သေချာသပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးထားသင့်တာ့ပေါ့ ကမ်းခြေဆိုတာကလည်း နိုင်ငံခြားသားတွေ သွားလာနေကျ နေရာတွေပဲလေ.မြန်မာလူမျိုးတွေကို အထင်သေးသွားမှာပေါ့..မကောင်းပါဘူး ကိုယ်ရွှေဈေးသယ်တို့ ရယ်..ဈေးလဲရောင်း သန်းရှင်းရေးလေးလဲလုပ်ပေါ့နော်...
အဲဒီကောင်က ဘာကောင်မို့လို့ အမိန့်ပေးရတာတုန်း..သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်
ဟို singapore လိုနေရာက လီကွမ်ယု
တောင် အဲဒီလိုပြောလို့မရဖူး...law and regulations ဆိုတာရှိတယ်ကွ..တော်တော်ကျက်သရေမရှိတဲ့လူတွေ...အဲဒါကြောင့်
who said.. lee kwen yuu can not commend? Learn about singapore more nro!
ဟုတ်ပါ့ဗျာ၊ လူတွေက စစ်ကျွန်ဖြစ်ရတာကို ပုံမှန်လို့ထင်နေကြတာကိုး။ ရင်နာစရာပဲ။
လီကွမ်းယု က စင်ကာပူကိုစိုးမိုးထားဆဲပါ...
စည်းမရှိကမ်းမရှိ အမှိုက်ပစ်တာ ကွမ်းတံတွေးထွေးတာ မြန်မာ့ဓလေ့တခုဆိုတာမသိကြသေးတာလို့ထင်ပါတယ်...လက်ညှိးမကောင်းရင် လက်ညှိး လက်မမကောင်းရင် လက်မပါ...
ကိုယ်တော်ေ၇ SG ဆိုတာ တပါတီစနစ်နဲအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးလား.. SG မှာ ဒီမိုကေ၇စီမ၇ှိဘူး..ပြောချင်၇င်လည်းနည်းနည်းလေ.လာပါဦး..စစ်ကျွန်ဖြစ်နေတယ်လိုတောပြောပြီးစစ်တပ်ကိုဆန်.ကျင်နေတဲ. BBC ကပဲ ခနခန လွင်.နေတာလေးနည်းနည်းတောနားထောင်ပါဦးကွ...
ဧရာဝတီခင်ဗျ..။ ဒီလိုကွန်မန့်က ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူသူတွေအပေါ် ရိုင်းပြစွာ ပြောဆိုထားတယ်ခင်ဗျ။ ဒီလိုကွန်မန့်ကို မတင်သင့်ဘူးလို့ ယူဆမိပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောခွင့်နဲ့ သူတပါးကို ရိုင်းပြစွာပြောခြင်းက မတူပါဘူး။ တဖက်သားကိုလေးစားသင့်ပါတယ်..။
အဲလို ပြောတိုင်းတင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လဲ စိတ်ထဲမတွေ့တာနဲ့ တွေ့သမျှသူကို သောက်သုံးမကျတဲ့သူတွေ ကျက်သတုံးတွေလို့ပဲ လိုက်ပြောနေတော့မယ်ခင်ဗျ။
ဈေးရောင်းတဲ့သူကရောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တာပါ။အမှိုက်ကောက်တဲ့အလုပ်ကအမှိုက်ကျုံးသမားတာဝန်ပါ။စားသုံးသူကလဲအမှိုက်ပစ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပစ်လိုက်ရင်အားလုံးပြေလည်သွားမှာပါ။ဒီတော့အမှိုက်ပုံးများများချထားလိုက်။အမှိုက်ကိုအမှိုက်ပုံးထဲမပစ်ရင်ဒဏ်ရိုက်။အမှိုက်သိမးတဲ့လူကလဲအမှိုက်ပုန်းမပြည့်လျှံမီလာလာသိမ်း။ဒီတော့အမက်သိမ်းတာဝန်ယူတဲ့စည်ပင်ကခိုကပ်မနေပဲဂရုတစိုက်လုပယ်။ဒီပြသနာဟာဖိုးလပြည့်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အကယ်ရ်ျဒီလိုရောင်းချခွင့်ကိုပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကလက်ခံတဲ့အစိုးရကမရောင်းဖို့ အမိန့် ထုတ်ထားတာကိုရောင်းဖို့ အမိန့် ဖိုးလပြည့်ပေးခဲ့ရင်ဖိုးလပြည့်မှားတယ်။အခုပြည်သူလက်မခံတဲ့အစိုးရဖြစ်နေတော့ဖိုးလပြည့်မှန်တယ်။အကုန်ပါးစပ်ဥပဒေ။ဒီတော့သာလုပ်ဖိုးလပြည့်အားပေးတယ်။ဒီမိုကရေစီရရင်တော့ဒါမျိုးမရဘူး။
ကဲ သားသား ဖိုးလပြည့်ရေ. ဒီကိစ္စမင်းရှင်းမှရလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်၊ ကြိမ်လုံးကောင်းကောင်း တစ်ချောင်းကိုင်ပြီး ချောင်းသာကိုပြန်သွား၊ စည်းမဲ့အမှိုက်ပြစ်တဲ့ဈေးသည်ရော၊ဈေးဝယ်ရော၊ အမှိုက်မသိမ်းတဲ့ စည်ပင်ရော၊ လက်ပိုက်ကြည့်နေကြတဲ့ ဟိုတယ်သားတွေရော တန်းစီအကုန်ရိုက်၊ အကုန်ပြန်ရှင်းခိုင်း။ ဒို့လူမျိုးတွေမင်းကိုကြောက်ပါတယ်။ ပြီးရင် စီဘောက်ပေါ် တက်လာပြီး အရေမရအဖတ်မရ အာချောင်နေတဲ့သူတွေ နောက်တခါစည်းကမ်းမဲ့ လေသရမ်းရင် ခင်ဗျားတို့ပါဒုတ်ဆက်မယ်လို့ပြော။ မနိပ်ဘူးလား။
ဦးဦးငတေ (တေဇ မဟုတ်ပါ)
တို.ကတော့ အခု ဘာလီမှာနေတာဆိုတော့ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေ မြန်မာပြည်သွားလည်အောင်လို. တို.နိုင်ငံက ကမ်းခြေတွေ အရမ်းလှကြောင်း။ အရမ်းသန်.ရှင်းကြောင်း။ရေအရမ်းကြည်တဲ့အကြောင်း တွေ ပြောပြထားတာ
သူတို.လည်း တော်တော်စိတ်ဝင်စားကြပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကြောက်လို.မသွားရဲဘူးတဲ့ :P
သီရိ said... :
သူ.နေရာ သူဌာဏနဲ.သူလုပ်ကြရမှာဘဲ ဈေးရောင်းတဲ.သူဈေးရောင်း အမှိုက်ကောက်/သိမ်း တဲ.သူကလုပ် အဲဒီမှာအုပ်ချုပ်တဲ.သူကစည်းကမ်းထုတ် မလိုက်နာရင်ဒဏ်ရိုက် ဒါဆိုရင်ပြည်သူလည်း နားလည်လာမယ် ရောင်းတဲ.သူလည်းနားလည်လာမယ် ကောင်းတာလုပ်ရင် အကောင်းမြင်ကြပါ
ကိုယ်ထက်အများကြီးငယ်ပေမင့် လေးစားသမှုနဲ့ ကို တပ်ခေါ်လိုက်ပါ့မယ်။
ဘူးသူဖြစ်လေတော့၊ နိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးရှိမှာပါ။
အခုကိစ္စ မှာကျနော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင် အောက်ခြေလူတန်းစားတွေအပေါ်ထားတဲ့ခင်ဗျားရဲ့စိတ်ထားပေါ်လွင်တယ်၊
ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်လို့ သာဓုခေါ်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ လုပ်နည်းကိုင်နည်းက
လိုအပ်နေပါတယ် ။ အမှန်က ဒီလိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေကိုအရင်ခေါ်ယူပြီး မိမိဖြစ်ချင်တာကို ဦးစွာသူတို့ကိုပြောပြရ
မှာဖြစ်ပါတယ်၊အဲဒီတာဝန်ရှိသူတို့က ဖြစ်နိုင်၏ မဖြစ်နိုင်၏ ပြန်လည်တင်ပြချက်တွေကို ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြိး မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းကဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်တာလည်း၊ဘယ်သူတွေက ဘာတွေပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်တာလဲ ၊ဘယ်လိုစည်မျဉ်းစည်းကမ်း(ကြိုနီစံနစ်)တွေကိုလျော့ပေး ဖျက်ပေးဖို့လိုမလဲ
ဆိုတာတွေရယ် ဖြစ်လာမဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ကိုအရင်ညှိနိုင်းပြီးမှ အကောင်အထည်ဖော်ရင် အခုလို ဘာမဟုတ်တဲ့အမှိုက်ပြသနာ ပေါ်စရာ အကြောင်းမရှိနိုင်ပါ။ လုပ်နည်းကိုင်နည်းလိုအပ်ချက်ပါ။ အခုလုပ်ရပ်ဟာ
န၀တ တခေတ်လုံး နအဖတခေတ်လုံးမှာ တံခိုးရှိသူတွေဘယ်သူမှစေတနာသန့်သန့်နဲ့မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့လုပ်ရပ်မို့ ကြိုဆိုပါတယ် ။(ဖားတာမဟုတ်ပါ) ဒီလိုအသေးအမွှားလေးတွေကနေ ဒီထက်အဆင့်မြင့်သော ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ ဥပမာ တာလေက
ငလျင်ဒေသတွေမှာ အားပေးစကား လေးဖြစ်ဖြစ်ရောက်အောင်သွားပြီးပြောကြည့်စမ်းပါ ။ ပီတိ ရဲ့ အရသာချိုပါတယ်
ဖိုးလပြည့် မှမဟုတ်ပါ ကျွှန်တော်တို့ရော ဘဝတလျှောက် မဆိုးခဲ့ကြဖူးဘူးလား ?။ ကိုယ့်အကြိုက်ကိုခဏဖယ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ။ အဆိုးများစွာလုပ်ခဲ့ဖူးသလို အကောင်းများစွာ လည်းလုပ်ခဲ့ဖူးကြမှာသေချာပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွှန်တော်တို့ရဲ့ မသိမှုနဲ့ ကိန်းနေတဲ့ လောဘ ဒေါသ မောဟ အမြစ်များကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလောဘ အဒေါသ အမြစ်လေးတွေပိုနေချိန်ဆိုရင်တော့ အခု ဖိုးလပြည့် လိုပဲ ကောင်းတာလေးတွေလုပ်ကြမှာပါ။ သူတစ်ဦး ဆိုးဖူးတိုင်း သူလုပ်သမျအားလုံးကိုမျက်စိမှိတ်ပြီး ဆိုးတယ် မကောင်းဘူးလို့သာဆိုနေရင် ကျွှန်တော်တို့လဲ အမှန်ကိုဖုံးကွယ်သူ မောဟာဂတိနဲ့ အဆိုးလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့။ အင်ဂုလိမါလအရှင်မြတ်ကြီး ရဲ့ဥပမာလိုပဲပေါ့။ ကောင်းတာလုပ်တဲ့အခါ ကောင်းတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါတော့ ဖိုးလပြည့် ရဲ့ သနားစိတ် (မေတ္တာ) ကို ကောင်းတယ်လို့ထောက်ခံပါတယ်။ သူ့စေတနာကအဲဒီ့အချိန်မှာ ဈေးရောင်းခွင့်ပေးပြီးမရှိသူများသက်သာစေဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။ အမှိက်ပွစေရယ်လို့မရှိမှာသေချာပါတယ်။ စေတနာကိုသာ ကံ ဟုကောက်ရပါတယ်။ သူ့ကို နောက်များလဲအခုလိုပဲအမြင်မှန်များ အမြန်ရနိုင်ပါစေလို့ ။ အမှိက်ပွတာကတော့ကျွှန်တော်တို့ရွှေမြန်မာအများစုရဲ့ထုံးစံလိုဖြစ်နေတဲ့တွေ့ နေရာမရှေင်အမှိက်ပြစ်တတ်မှုကြောင့်ပါ။ အို-- ကိုယ်မပြစ်လဲသူပြစ်မှာပဲ ငါ့တစ်ယောက်မပြစ်လို့ဘာမှပိုထူးလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ မိရိုးဖလာတာဝန်မဲ့တတ်တာကြောင့်ပါ။ သင် ရော အပြင်ရောက်တဲ့အခါ ကြုံသလိုအမှိက်ပြစ်တတ်ပါသလား ခင်မျာ ?။ ချောင်းသာမှာအမှိက်များနေတာအခုမှမဟုတ်ပါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်ကတည်းကပါခင်မျာ ။
ဖတ်ရတာမောလာပီ ခုငြင်းနေတဲ့လူတွေ သွားကောက်ဗျာ အဲအမှိုက်တွေကိုး:P
he allowed everyone to open shops, because he hates all other army related people making money on Chaung Tha beaches...